Unite Top - Jiangyin Unite Top Heavy Industry Co., Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ ပရောဂျက်အသစ်များ၏ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ပိုမိုအားကိုးပါမည်။ ဖောက်သည်များအား ဗဟိုအနေဖြင့်၊ ထုတ်ကုန်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေခြင်း၊ အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်ပါဝင်ရန်၊ လျင်မြန်သော၊ ထိရောက်သော အရောင်းအပြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ အပိုပစ္စည်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးပေးဆောင်ရန်၊ တစ်သက်တာလုံး အရည်အသွေးမြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်။
Jiangyin Unite Top Heavy Industry Co.Ltd. သတ္တုပြန်လည်အသုံးပြုစက်များ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2004 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထုတ်လုပ်မှုအတိုင်းအတာကို တိုးချဲ့ကာ 2012 ခုနှစ်တွင် စက်မှုဥယျာဉ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ ကုမ္ပဏီသည် ထုတ်လုပ်မှု စက်ယန္တရားများနှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် အကြီးစားနှင့် အလတ်စား ဟိုက်ဒရောလစ် စွမ်းရည် အစုံ 3,000 ကျော်ကို နှစ်စဉ် ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
လက်ရှိတွင် အမှိုက်ထုပ်၊ ဖြတ်၊ ထုပ်ပိုးထားသော အမှိုက်ကား အပိုင်းအစများ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှု စီးရီး တစ်ဒါဇင်ကျော်၊ ထုတ်လုပ်မှုစကေး အမျိုးပေါင်း ရှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသည်။
ထုတ်ကုန်များကို ယူအက်စ်၊ ဂျပန်၊ ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီး၊ အာဖရိက၊ ဥရောပ၊ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသပေါင်း ၇၀ ကျော်သို့ တင်ပို့လျက်ရှိသည်။
Jiangyin Unite Top Heavy Industries Co.Ltd. တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပိုင်းအစများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်ကိရိယာ R&D နှင့် ကြီးမားသော ဟိုက်ဒရောလစ် စက်ပစ္စည်း ကျောရိုး လုပ်ငန်းများ၊ ပြည်တွင်း၌ သတ္တုအညစ်အကြေးများ ထုတ်လုပ်သည့် ဟိုက်ဒရောလစ်ဗလာ၊ စိတ်မဟုတ်သော ညှပ်များ၊ ခြစ်ဆံများ၊ အပိုင်းအစ ကားဗလာကို လူသိများသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ဒဏ်ရာကင်းစင်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုပ်ပိုးမှု၊ ဖြတ်တောက်မှု၊ ထုပ်ပိုးမှု အမှိုက်ကားတစ်စီး ရှိသည်။ အပိုင်းအစ တစ်ဒါဇင်ကျော် မီးလောင်ပျက်စီးပြီး အပိုင်းအစ တစ်ဒါဇင်ကျော်၊ ထုတ်လုပ်မှုစကေး အမျိုးပေါင်း ရှစ်ဆယ်ကျော်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များကို အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ဘရာဇီး၊ အာဖရိက၊ ဥရောပ၊ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသ ၇၀ ကျော်သို့ တင်ပို့လျက်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီသည် ယခုအခါ စက်ယန္တရားများနှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် အကြီးစားနှင့် အလတ်စား ဟိုက်ဒရောလစ် စွမ်းရည် အစုံပေါင်း 3,000 ကျော် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး အရည်အသွေးမြင့်၊ လူငယ်၊ ဆန်းသစ်သော သုတေသနအဖွဲ့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုရှိသော ကုမ္ပဏီသည် သုတေသနအဖွဲ့ကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားသော အထူးထုတ်ကုန်များကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်၊ ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်စဉ် ထုတ်ကုန်သစ် 10 ကျော်ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး အမျိုးသား မူပိုင်ခွင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် "Jiangsu ပြည်နယ်ရှိ ပုဂ္ဂလိကနည်းပညာလုပ်ငန်းများ" Light Product Quality Assurance Center, China, prestige double safeguard demonstration unit သည် မြှင့်တင်ရေးယူနစ်များကို အာရုံစိုက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9000 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ အချို့သောထုတ်ကုန်များသည် CE လက်မှတ်ရရှိထားသည်။
နောက်ထပ် ထုတ်ကုန်များကို ကြည့်ပါ။
ပိုလန် ဖောက်သည်များ လာရောက်ကြသည်။
မလေးရှားမှ ဖောက်သည်များ လာရောက်ကြသည်။
အိန္ဒိယ ဖောက်သည်များ လာရောက်ကြသည်။
ပါကစ္စတန် ဖောက်သည်များ လာရောက်ကြသည်။
ရုရှား ဖောက်သည်များ လာရောက်ကြသည်။
အပိုင်းအစများ အသင်း အစည်းအဝေး
Jiangyin Unite Top Heavy Industries Co.Ltd သည် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များ၊ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံ၊ ပြည်ထောင်စု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ဖောက်ထွက်မှု၊ လက်တွဲမှု၊ ဝိုင်းရံထားသော မြေယာပံ့ပိုးမှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ထရီနီဒက်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကို အတူတကွ ဖန်တီးရန်အတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
Pop-Top Can Baler ကိရိယာ, အိမ်လုပ်ကတ်ထူပြားဖဲချပ်, Leaf Compactor နှင့် Baler, Aluminum Foil Baler စက်, Y81 ဟိုက်ဒရောလစ် Baler, အပိုင်းအစ သတ္တုကြိတ်စက်,